mardi, 03 novembre 2020 22:13
Isaorana ny filoha Rajoelina nangataka ny amerenana ny vakoka Malagasy
Pilo kely: Isaorana ny filoha Rajoelina nangataka ny amerenana ny vakoka Malagasy, ka anatanterahan'ny filoha frantsay ny velirano nataony tany Ouagadougou ny taona 2017 ny hamerenana ireo vakoka nalain'ny frantsay tamin'ny fanjanahan-tany.
Ny an'ny Guinée efa niverina, dia ny antsika indray izao.
Tsy tokony adino ny mitady ilay iray nisy nangalatra tamin'ny Tetezamita iny, ilay an'i Ranavalona 1er.
Nalaky navoakanareo koa ilay bala, nefa mbola rahampitso ny 04 novambra hanaovana ny sonia.
mardi, 03 novembre 2020 19:28
Vakokaka : Vita ireo lapa nasiam-panarenana ao Anatirova, hiverina ny satroboninahitr’i Ranavalona III
Vita ny asa fanarenana ny lapan'i Manjakamiadana sy ny lapan'ny Besakana. Hotokanana amin'ny 6 Novambra 2020, 25 taona taorian'ny nahamay ny tao Anatirova, araka ny nambaran’ny filoha Andry Rajoelina androany tao amin'ny Lapam-panjakana Ambohitsirohitra.
Ho tonga eto Madagasikara amin'ny Alakamisy 05 Novambra 2020 ny satroboninahitry ny Mpanjakavavy Ranavalona III, rehefa nentin’ny mpanjanaka 123 taona lasa izay, ary naranty tao amin’ny Mozean’ny Tafika frantsay ao Paris.
mardi, 03 novembre 2020 19:13
Mayotte : Niondrana an-tsokosoko, Malagasy miisa 20 naverina eto Madagasikara
Malagasy miisa 20 (ahitana zaza tsy ampy taona miisa 07) niondrana an-tsokosoko an-tsambokely niazo an’i Mayotte. Roa andro teny ambony sambo kely izy ireo raha niala tao Nosy-Be. Tratran'ny Polisy tany an-toerana izy ireo ka naverina teto Madagasikara.
Nanao ny fanadihadiana mahakasika ity fiondranana ity ny Polisy Malagasy ka olona miisa 03 no voasambotra. Tao anatin'ny famotorana no nahalalana fa mifampiraharaha amin'ireo tompona sambo any avaratra (Ambanja, Nosy Be) ireto olona voasambotra ireto hitondra olona any Mayotte.
mardi, 03 novembre 2020 19:06
Antananarivo Renivohitra : Nohamafisina ny « opération épave »
Nanomboka androany 03 novambra 2020 ny fanamafisana ny « opération épave » izay nataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. “Camion ventouse ” miisa 3 no miasa manala ireo fiara mijanona manelingelina fifamoivoizana, ireo fiara maty efa tena ratsy mipetraka amoron-dalana sy ireo fiara miakatra ambonin’ny « trottoir ».
Ho entina mamerina ny filaminana sy ny fitsipika eto Antananarivo ny tanjona amin’izao hetsika izao, hoy ny avy eo anivon’ny Kaominina.
mardi, 03 novembre 2020 19:05
Côte d'Ivoire : Manamafy ny CEDEAO fa nizotra tsara ary azo ekana ny fifidianana
Ankoatr'ireo fifandonana sy fampiasan-kery tamin'ny toerana vitsivitsy, dia manamafy ny vondrona ara-toekarena ny firenena Afrika andrefana na CEDEAO, fa nizotra tsara ary azo ekena ny fifidianana filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire ny sabotsy 31 oktobra lasa teo.
Miantso ny isian'ny fifampiresahana ny vondrona CEDEAO.
Atao androany 03 novambra ny fifidianana izay ho filoha amerikanina. Hifaninana amin'izany ny filoha amperinasa Donald Trump, Repoblikanina, sy Joe Biden avy amin'ny antoko Demokraty.
Amerika dia firenena manana rafitra federaly, izay ikambanan'ireo Etats fédérés miisa 50, izay voamarika kintana 50 amin'ny sainam-pirenena amerikanina.
Miaraka lany izany ny Filoha amerikanina sy ny filoha lefitra iray miaraka aminy (Ticket).
1- Iza ireo mpifidy
Mpifidy vaventy 538 no mifidy izay ho Filoham-pirenena amerikanina, izay mitovy isa amin'ireo mandrafitra ny Congrès, 435 représentants (toa ny solombavam-bahoaka) ary 100 senatera, miampy mpifidy vaventy 3 ho an'ny District de Columbia (Whashington DC).
Izany hoe izay isan'ny représentant sy isan'ny senatera ao amin'ilay Etat no isan'ireo Mpifidy vaventy na Grand électeur fidiana ao amin'io Etat fédéré io.
mardi, 03 novembre 2020 11:45
Mireille Rakotomalala : Notoloran’ny Japoney mari-boninahitra « Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent »
Navoakan’ny Governemanta japoney ny 3 novambra 2020 ny lisitry ny fanolorana mari-boninahitra ho an’ny taona 2020. Tamin’ity taona ity dia notolorana an’i Ramatoa Mireille Mialy Rakotomalala, Ambasadaoron’i Madagasikara tany Japana sy Mininistry ny Kolontsaina sy ny Vakoka teo aloha ny mari-boninahitra “Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent”.
Ity mari-boninahitra ity dia nomena azy noho ny anjara biriky noentiny tamin’ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’i Japana sy Madagasikara.
Ramatoa Mireille Mialy Rakotomalala dia fantatra tamin’ny fikelezany aina ho amin’ny fampiroboroboana ny fifanakalozana sy ny fifankazahoana teo amin’i Japana sy Madagasikara.
mardi, 03 novembre 2020 11:35
Anororo Amparafaravola : Hifarana anio ny Feraomby 2020
Hifarana anio talata ny fankalazana ny fomban-drazana Feraomby, izay fanao isaky ny roa taona aty Anororo Amparafaravola.
Fotoana fangataham-pitahiana mba hambinina amin’izay atao, araka ny fomban-tany mahazatra, ny Feraomby ho an’ireo mponina ao amin’io kaominina ambanivohitra iray any ampitandrefan’Alaotra io.
Fomba atao hamataran-taona na tsara na ratsy ihany koa ny Feraomby.
Anisan’ny fomba iray entina mankalaza ny Feraomby ny fanaovana festival manerana ny tanàna mandritra ny herinandro, ankoatra ny fanatanterahana ny fomba mahazatra.
Nafohezina araka izay azo atao ny fotoana nanaovana azy tamin’ity taona ity noho ny antony ara-pahasalamana.
Noferana ho roa andro ihany ny fotoam-pankalazana tamin’ity indray mitoraka ity.
mardi, 03 novembre 2020 11:09
Côte d’Ivoire : Nahazo isam-bato 94,27% ny filoha amperinasa Alassane Ouattara
Namoaka voka-pifidianana vonjimaika filoham-pirenena natao ny sabotsy 31 oktobra teo ny CEI na Vaomieram-pifidanana mahaleotena any Côte d’Ivoire, milaza fa nivoaka mpandresy tamin’ny salanisam-bato 94,27% ny filoha amperinasa Alassane Ouattara.
Ho an’ireo kandida mpifanandrina taminy dia 0,99% no azon’i Pascal Affi N’Guessan. 1,66% ho an’i Henri Konan Bédie ary 1,99% ny an’i Kouadio Konan Bertin kandidan'ny mpanohitra. Ity farany niantso ny Ivorianina tsy andeha hifidy anehoana ny tsy fankasitrahana ny fiverenan'i Alassane Ouattara fanintelony eo amin'ny fitondrana .
53,9% ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy araka ny atontanisa navoakan’ny CEI.
Ny Conseil Constitutionnel no mamoaka ny vokatra ofisialy.
mardi, 03 novembre 2020 09:02
USA : Ho vahinin'ny Embassy Talk ny mpandraharaha Tahina Razafinjoelina
USA : Ho vahinin'ny Embassy Talk ny mpandraharaha Tahina Razafinjoelina ny 04 novambra amin'ny 02ora tolakandro
"Ny Tanora sy ny Fandraharahana" no lohahevitra hovoaboasan'i Tahina Razafinjoelina, Talem-pitantanan'ny IT University sy ny Bureau International de Consultance en informatique, namorona ny Vondrom-barotra Vidy Varotra, ary mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'Antananarivo sy ny IT University.
Andeha mivantana amin'ny facebook izany tafatafa izany ny 04 novambra 2020 amin'ny 02 ora tolakandro.